Dowladda Somaliya oo wada qorshe ay ku doonayso inay ku maamusho Mashaariicda Midowga Yurub ee Somaliya – STAR FM SOMALIA
Dowladda Somaliya oo wada qorshe ay ku doonayso inay ku maamusho Mashaariicda Midowga Yurub ee Somaliya
Hindisahan oo ay leedahay Wasaarada Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga, ayaa looga gol leeyahay sidii Dowladda Federalka Somaliya ay u maamuli laheyd, dhamaan Mashaariicda kala duwan ee Midowga Yurub uu ka fuliyo gudaha Somaliya.
Mashaariicda Midowga Yurub ee Somaliya, ayaa laga Maamulaa Magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo Hay’ado halkaasi uu fadhigooda uu yahay ayaa bixiya Mashaariicda iyo Qaraashaadka ku baxa intaba, iyaga oo ka soo qaata Midowga Yurub.
Sida qorshaha uu yahay Dowladda Somaliya waxa ay doonaysaa horaanta Sanadka 2017-da in guud ahaan Mashaariicda Midowga Yurub ay hoos yimaadaan Dowladda, lagana Maamulo Magaalada Muqdisho, iyadoo aysan jirin cid u dhaxeysa Dowladda iyo Midowga Yurub.
Sakariye C/laahi Xasan oo ah Agaasimaha Wasaarada qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga Dowladda Somaliya ayaa sheegay qorshahaasi inuu hada socdo, islamarkaana Wasaarada la tashiyo kala duwan ay la sameynayso Wasaaradaha Maamul Goboledyada dalka ka jira si loo suurageliyo arintaan.
“Waxyaabaha ugu badan ee arrintan wax ka qaban doonto waxaa kamid ah shaqo la’aanta dalka ka jirta ee dhallinyarada u keenta iney tahriibaan ama meello kale aadaan, mashaariicda gudaha dalka ayeey ka dhici doonaan heer kore illaa heer hoose waxaa maamuli doonta Soomaaliya, waxaa dhici doonta in hay’ado badan oo Nairobi fadhiya ay dalka yimaadaan oo dowladda ka ammar qaataan, waxaa is bedalaya markaas wejigii ay lahayd Soomaaaliya, la ogaado hay’adaha sidey wax u qabtaan, waxayna taasi sahleysaa in nidaamkii dowladnimo soo laabto, uuna kabmo dhaqaalaha dalka.” ayuu yiri Agaasimaha.
Ujeedada guud ee arintaan laga leeyahay ayaa ah Hay’adaha kala duwan ee fadhigooda uu yahay Magaalada Nairobi ee Mashaariicda fulintooda ka shaqeeya inay yimaadaan Magaalada Muqdisho, si dhalinyarada Somaliyed ee waxbartay Shaqooyin ay uga helaan.
Hadii Dowladda Federalka Somaliya qorshahan ay u suurageliso sidii loogu talo galay, ayaa fursad waxa ay noqon doontaa dhalinyarada Somaliyed ee iyaga oo waxbartay naftooda ku biimeynaya tahriibka.
Cali Guudlaawe oo isu sharaxay xilka Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Hirshabelle